Myanmar Hackers သမိုင်းကြောင်း ( ပေါ်ပေါက်လာပုံ) | Myanmar Black Hacking
0 Myanmar Hackers သမိုင်းကြောင်း ( ပေါ်ပေါက်လာပုံ)
Myanmar Hackers Evolution
Myanmar Hacker ဆိုတာနဲ့ပတ်သတ်ရင် တော်တော်များများက Blink Hacker Group ကိုပဲ ပြေးမြင်ကြတယ် ဟုတ်ပါတယ်
Blink Hacker Group ကို ဘယ်လိုပဲ မြင်မြင်သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေ ဟာ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်
သူတို့ဟာ Myanmar Hacker Evolution ( မြန်မာ ဟက်ကာ အုံကြွမှု ) အပေါ် အတော်ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ.။
တကယ်တော့ BHG မပေါ်ခင်ကတည်းက မြန်မာ ဟက်ကာတွေရှိခဲ့တာပဲ ။
Planet Creator တို့ YEHG ( YGN Ethical Hacker Group ) တို့ လို Hacker Group တွေလည်း ရှိခဲ့တာပဲ ။
ပြီးတော့ YEHG ကို DDos တိုက်လို့ ပြဿနာတွေ တက်ကုန်တာမျိုးလို Hacker တိုက်ပွဲတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတာပဲ ။ MMSO လို Hacker Forum သီးသန့် မဟုတ်သော်လည်း Hacking & Security Forum တွေရှိခဲ့တာပဲ ။
မဇ္ဈိမ ကို DDos တိုက်ခဲ့ပြီး Cyber War အသွင် လုပ်တာလည်း ရှိခဲ့ဖူးတာပဲ ။
ဒီအထိ Hacker Evolution ( ဟက်ကာ အုံကြွမှု ) ဆိုတာမျိုးဖြစ်မလာသေးဘူး ။
၂၀၁၂ Anonymous , Wikileaks , lulz တို့ကျေးဇူးနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Hacker အုံကြွမှုကြီးက မြန်မာနိုင်ငံကို ရိုက်ခတ်လာတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား . ??
Blink Hacker Group ဆိုပြီး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ပေါ်လာတယ် ။
စလာတုန်းကတော့ စစ်အစိုးရနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မီဒီယာ တွေကို တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ခေတ်လူငယ် Website ကို စတင် တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် ။
YTP ကို DDos နဲ့ တိုက်ခိုက်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့တယ် ။
ဒီမှာပဲ နည်းပညာသမားတော်တော်များများအပြင် နိုင်ငံရေးသမားတွေ အခြား နည်းပညာ နယ်က မဟုတ်တဲ့လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့တယ် ။
နည်းပညာနယ်ပယ်ရဲ့ အပြင်ဘက်က လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ မြန်မာဟက်ကာ ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုကို ထည့်ပေးခဲ့တယ် ။
BHG စတင်တည်ထောင်ပြီး 1st Generation အဆုံးသတ်ခါနီးမှာ Myanmar Hacker Forum တစ်ခု တည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်　။
ဒါပေမယ့်　အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်　အဲ့ဒီ့ဖိုရမ်　ပြီးဆုံးမသွားဘူး　။
ဒီတော့　ပထမဆုံး　မြန်မာ　ဟက်ကာ　ဖိုရမ်ကို　ပြောဆိုရင်　အဲ့ဒီ့　ဖိုရမ်ကို　ပြရလိမ့်မယ်　အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာကတစ်ကြောင်းပေါ့　။
BHG　1st Generation က　Myanmar Website တွေကို　စတင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ　Myanmar Hacker University ဆိုပြီး　wall.fm အခြေစိုက်　ဆိုဒ်တစ်ခု　ထွက်လာပါတယ်　။
BHG ထက်စာရင်　သူတို့က　ပိုပြီး　Open　ဖြစ်ပါတယ်　။
သို့သော်လည်း　ပညာအဆင့်အတန်းမှာတော့　နိမ့်ကျပါသေးတယ်　။　အားရစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့　စည်းလုံးမှုပါပဲ　။　သူတို့　အလွန်စည်းလုံးပါတယ်　။　ကျွန်တော့်အမြင်မှာ　ရိုင်းပင်းတယ်　လို့　မြင်တယ်　။　နောက်ပိုင်း　သူတို့　Myanmar Hacker Forums ဆိုပြီ　Hack Forums တစ်ခု　တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်　။
ပထမဆုံး　မဟုတ်သော်လည်း　Active အဖြစ်ဆုံး　အကြီးမားဆုံး　ဖိုရမ်လို့　ပြောရပါလိမ့်မယ်　။
ဒီလိုနဲ့　BHG 1st Generation ပျက်စီးသွားပါတယ်　။　သူတို့　အဖွဲ့ဖျက်ကြောင်း　ကြေညာပြီး　မကြာခင်မှာပဲ　Myanmar Cyber Army ဆိုတာ　ပေါ်လာပြီး　Myanmar Website တွေကို　တိုက်ခိုက်ပြန်တယ်　။ဒါ　နည်းနည်းတော့　တိုက်ဆိုင်မှုက　ကြီးမားသလို　ခံစားရပါတယ်　:-P
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာတော့　Myanmar Hacker Uniteam , BHG အပါအ၀င်　မြန်မာဟက်ကာအရေးလှုပ်ရှားသူတော်တော်များများ　စုစည်းမိလာပါတယ်　။　ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်　Website တွေကို　တိုက်ခိုက်ရင်း　ဆန္ဒပြုကြပါတယ်　။　အခြား　နည်းပညာသမားတွေအပြင်　နည်းပညာအပြင်ဘက်ကလူတွေပါ　Hacking နဲ့ပတ်သတ်တဲ့　Information တွေ　Source တွေကို　မြန်မာလိုသော်လည်းကောင်း　မျှဝေခြင်းများဖြင့်　လွယ်လွယ်ကူကူရရှိလာပါတယ်　။
ဥပမာ DDos လိုဟာမျိုးပေါ့ အတိအကျ အသေအချာတွေမသိသော်လည်း DDos ကို ခြုံသိလာတယ် DDos Tool တွေအကြောင်းသိလာတယ် ။
Myanmar Cyber Army ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Hacktivist တော်တော်များများ စုဝင်လာတယ် ။
လက်ရှိ တရားဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့မြန်မာဟက်ကာအဖွဲ့ အစည်းအချို့ ကတော့ Blink Hacker Group , Black Hat Are , Myanmar Hacker Warriors , Myanmar Noob Hackers , Gray Hat Teenagers Team , ( MNH ( Myanmar Noob Hackers ) ကတော့ Op_BD Cyber War ဖြစ်ပြီးချိန်မှာ အသစ်ဖွဲ့ စည်းလိုက်ကြတဲ့ အဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခုအသစ်လူငယ်လေးတွေဖွဲ့ စည်းပီး အသစ်ထပ်ထွက်ရှိလာတာကတော့ GHT (Gray Hat Teenagers Team) တို့ ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီအဖွဲ့ အစည်းတို့ က လက်ရှိလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်
ဒီတော့ ခြုံကြည့်ရင် BHG ဟာ နည်းပညာ သမားတွေအပါအ၀င် နည်းပညာနယ်ပယ်အပြင်ဘက်ကလူတော်တော်များများရဲ့ ခေါင်းထဲကို မြန်မာဟက်ကာဆိုတဲ့ စကားလုံးရိုက်သွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီး MM Hack Forums ကတော့ ပညာတွေမျှဝေတဲ့နေရာမှာ အဓိကကျလာပါတယ် ....
မြန်မာဟက်ကာများ နောက်ထပ်မြောက်များစွာ ပေါ်ပေါက် ပေါ်ထွန်းလာစေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ကိုးကား - လှိုင်ဝင်းအောင်HHHHHHHHHHHHHH